Apple goro onye bụbu onye YouTube na Spotify onye isi iji bulie igwe okwu ọdịyo ya | Esi m mac
Apple goro onye bụbu onye YouTube na Spotify onye isi iji bulie usoro mgbasa ozi ya
Ụlọ Ignatius | | Apple, Noticias
Anyị na-ekwu maka afọ ole na ole gbasara atụmatụ Apple ga-ekwe omume ịbanye n'ime okike. N'oge a ọ ewerela nzọụkwụ mbụ na ihe ngosi nke eziokwu nke ngwa, mmemme nke mechara ndekọ ya na n'oge na-adịghị anya ga-adị naanị maka ndị debanyere aha Apple Music. Mmemme Carpool Karaoke ga-abịarukwa n’elu ikpo okwu a n’oge na-adịghị anya karịa nke mbụ. Mana ọ dị ka ọ bụghị naanị ha ga-apụta na Apple Music, ọbụlagodi na anyị nwere ike ịkọpụta mbinye aka ụlọ ọrụ ọhụrụ, onye bụbu onye isi YouTube, onye ya na ụfọdụ asịrị, Emere ya iji kwalite okike nke ọdịnaya.
Dabere na akwụkwọ akụkọ The Information, mbinye aka ọhụrụ, Shiva Rajaraman, ga-akọrọ Eddy Que, onye isi osote onye isi oche nke Software na Ọrụ Apple. Dịka anyị nwere ike ịgụ na profaịlụ LinkedIn ya, Shiva arụburu ọrụ afọ 8 na YouTube, ka emesịa bụrụ akụkụ nke ọkwa Spotify n'oge afọ abụọ gara aga. Oge na-abịa Ọ ga-ahụ maka atụmatụ ọdịyo nke ụlọ ọrụ ahụ.
Shiva bụ akụkụ dị mkpa nke nkwekọrịta YouTube ahụ na Disney maka nke ikpeazụ ahụ iji nye ọdịnaya ya niile site na usoro ndenye aha. I sonyela na mmemme ndị yiri ya na Spotify, tinyere ikikere ịgbasa ozi na Disney, Time Warner na NBC, yana mmezu nke mmekorita di iche iche na ngwa ufodu dika Discover. Ọ na-arụsi ọrụ ike na-arụkọ ọrụ na ihe e kere eke nke ngalaba Podcast ngalaba.
Shiva ga-ahụ maka ngalaba ọdịyo nke Apple Music, ngalaba nke, dịka m kwuru na mbido isiokwu a, amalitelarị, mana O yiri ka n'oge a, ha enweghị usoro akọwapụtara nke ọma n'ọhịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple goro onye bụbu onye YouTube na Spotify onye isi iji bulie usoro mgbasa ozi ya
macOS Sierra 10.12.4 ukara, Apple suppliers, CarPlay gam akporo Auto tụnyere na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Apple ka kwụsiri ike na mbuso agha mgbanwe ihu igwe